जब अनलाईन कक्षामा सहभागी सबै विद्यार्थीको मोबाईलमा बयश्क फिल्म चल्न थाल्यो ! जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण अहिले नेपालसहित विश्वका धेरै देशहरुमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । तर अनलाइन कक्षामा केही समस्याहरु पनि आउँने गरेका छन् ।
यस्तै एक घटना अहिले बाहिर आएको छ । शनिबार मध्य प्रदेशको श्योपुर जिल्लामा एउटा स्तब्ध पार्ने घटना भयो । त्यस पछि जिल्लामा सबै अनलाइन कक्षा बन्द गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
८ कक्षाका बच्चाहरूको अनलाइन कक्षा स्कूलको वाट्सएप समूहमा चलिरहेको थियो । अचानक, वयस्क फिल्महरू सबैको मोबाइलमा प्ले हुन थाल्यो । त्यसपछि त्यहाँ एक हलचल सिर्जना भएको हो ।
श्योपुरका स्कूलहरू कोरोना महामारीको कारण बन्द गरिएका छन् । यस्तो अवस्थामा, सबै बच्चाहरू अनलाइन अध्ययन गरिरहेका छन् । शनिबार, अंग्रेजी विषयमा पिरियडमा विद्यार्थीहरु मोबाइल फोनमा वयस्क चलचित्र चल्न थाल्दा आश्चर्यचकित भएका हुन् ।
कक्षा स्कूलको म्याडमले लिइरहेकी थिइन् । बच्चाहरूको अभिभावकले फोनमा देखिएको उक्त दृश्यपछि आक्रोश पोखेका छन् । स्कूल व्यवस्थापनमाथि अभिभावकको आक्रोश धेरै नै देखिएको छ ।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘हामीले तुरून्त अनलाइन कक्षा बन्द गर्यौं र फोन स्विच अफ गर्यौ । यस विद्यालयका धेरै जसो विद्यार्थीहरू सरकारी अधिकारी र व्यावसायिक परिवारका हुन् ।’ श्योपुर मध्य प्रदेशको एक जिल्ला हो, जुन राजस्थानको सवाई माधोपुर जिल्लाको नजिक छ ।
उही समयमा, स्कूलका प्रधानाध्यापक रोहित जोनले भने, ‘यस्तो घटना भएको छ र यो केही ह्याकरहरुको काम हो । हामीले सबै अनलाइन कक्षा बन्द गर्यौं । सबै सुधार गरेपछि, कक्षा फेरि सुरु हुन्छ । अब हामी हाम्रो अनलाइन कक्षाको सुरक्षालाई अझ मजबुत पार्दछौं, ताकि त्यस्ता घटनाहरू फेरि नहोस् ।’
यस बारे एनएसयूआईले आइतबार प्रदर्शन गरेको छ । स्कूल प्रबन्धको विरुद्ध प्रहरी चौकीमा उजुरी गरिएको छ । उनीहरूले यसमा संलग्नलाई पक्रन पनि माग गरेका छन ।
कोतवाली प्रहरी चौकी इन्चार्ज रमेश डन्डेले भने, ‘यो अति नै संवेदनशील विषय हो । मैले अनुसन्धानको लागि वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पेको छु । उनी स्कूल व्यवस्थापनसँग कुरा गर्दै छन् ।’
ह्याकरविरुद्ध विद्यालय प्रबन्धनले कुनै एफआईआर दर्ता गरेको छैन जसकारण बच्चाका बाबुआमामा थप रिसाएका छन् । नेपालमा पनि एक मन्त्री सहभागि कार्यक्रममा यस खालका चलचित्र खुलेको धेरै भएको छैन । News Source